September 2017 – Trend.com.mm
သင်မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အကြီးမားဆုံးအရာများ
Posted on September 29, 2017 by Wint
ဟိုးအရင်တုန်းကဆို လူသားတွေထက်အဆမတန်ကြီးတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့အခြားအဆမတန်ကြီး တဲ့ အရာတွေကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်တောင် ကြီးလဲဆို စကားလုံးတွေနဲ့တောင် တိုင်းထွာပြောလို့မရဘူးတဲ့။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Environment, People & PlanetLeaveaComment on သင်မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အကြီးမားဆုံးအရာများ
တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေ အခုခတ်မှာ သိပ်များလာပါ တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်စိတ်နဲ့ ထပ်တူကျမယ့်လူမျိုးကို တွေ့လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင် တွေးမိကြပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on အခုချိန်ထိ ဘာကြောင့် single ဖြစ်နေသေးတာလဲ?
ကျန်းမာရေးညီညွတ်ပြည့်စုံဖို့ ဗီတာမင်စီလိုအပ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက အလှအပအတွက်လည်းအကျိုးရှိစေပါတယ်။ဗီတာမင်စီက သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အလှအပအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာပြောပြပေးသွားပါမယ်။ ၁။ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးတယ် ဗီတာမင်စီက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အလုပ်လုပ်တဲ့ဆဲလ်တွေကိုပိုပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ဗီတာမင်စီက ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလဲ
ကိုရီးယားမင်းသားချောလေး Kim Soo Hyun ဟာ အောက်တိုဘာ ၂၃ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့စာရင်းပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ “မင်းသား Kim Soo » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on အောက်တိုဘာလမှာ စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့ စာရင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားချော Kim Soo Hyun
Posted on September 28, 2017 by Wint
အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာချက်များစွာရှိပါတယ်။ အတော်များများက ချစ်သက်တမ်းကြာရှည်အောင် ဘယ်လိုတည် ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ထားကြပါတယ်။ စိတ်ချင်းမတူညီတဲ့ သူစိမ်းနှစ်ယောက် ချစ်ကျွမ်းဝင်ကြတဲ့အခါ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ချစ်သူတွေကြား ခဏခဏပြဿနာတက်နေရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း(၄)ချက်
ချစ်သူအတွက်ရိုမန်တစ်ဖြစ်စေမယ့် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့စဥ်းစားနေရင် ဒီလက်ဆောင်တွေကိုမမေ့ထားနဲ့နော်
Posted on September 28, 2017 January 9, 2019 by Noel
ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို အကောင်းဆုံး ကိုပဲပေးချင်ကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေထက် သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်အမှတ်တရတွေဖန်တီးပေးတာကိုပိုပြီးလိုချင်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ရိုမန်တစ်လည်းဖြစ်စေမယ်၊ချစ်သူကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလက်ဆောင်တွေထဲကရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ၁။မိတ်ကပ်ပစ္စည်းလက်ဆောင်ပေးပါ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ချစ်သူအတွက်ရိုမန်တစ်ဖြစ်စေမယ့် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့စဥ်းစားနေရင် ဒီလက်ဆောင်တွေကိုမမေ့ထားနဲ့နော်
တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် ဘာလို့ပုံမှန်သောက်ပေးသင့်တာလဲ?
လက်ဖက်ရည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဒုတိယ အကောင်းဆုံးဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်အမျိုးစားတွေက တော့ များစွာရှိပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ပူ (သို့) » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် ဘာလို့ပုံမှန်သောက်ပေးသင့်တာလဲ?
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားလှပတဲ့မိန်းမပျိုလေးဖြစ်လာမယ့် ကလေးသရုပ်ဆောင်လေး
Posted on September 28, 2017 by Noel
ကိုရီးယားနိုင်ငံကအင်တာတိန်းမန့်အေဂျင်စီတွေဟာ ချောမောလှပပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်းမွန် တဲ့မင်းသား၊မင်းသမီးတွေကို စင်တင်ပေးနေတာအားလုံးသိပြီးသားပါ။ ဒီကလေးမလေးကိုလည်း ချန်ထားလို့မရပါဘူး။ ငယ်ရွယ်ပြီးအနုပညာပါရမီလည်းပါတဲ့ကလေးသရုပ်ဆောင်လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ Cho » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားလှပတဲ့မိန်းမပျိုလေးဖြစ်လာမယ့် ကလေးသရုပ်ဆောင်လေး
ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ Selfie ပုံတစ်ပုံရဖို့ အဆင့်၃ဆင့်လိုတယ်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Suho
နာမည်ကြီးအဆိုတော်အဖွဲ့EXO ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Suhoက ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်း တစ်ပုံရဖို့ အဓိကအခြေခံအဆင့် ၃ဆင့်လိုတယ်လို့သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in K-Pop, Music, NewsLeaveaComment on ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ Selfie ပုံတစ်ပုံရဖို့ အဆင့်၃ဆင့်လိုတယ်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Suho
ဒီအချက် ၇ချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဟာ အနာဂတ်မှာ အရမ်းကိုအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသက်သေပြနေ
အနာဂတ်ကိုဘယ်သူမှကြိုမတွေးနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ သင့်မှာရှိတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကိုကြည့်ပြီး အနာဂတ်မှာအောင်မြင်မလား ကျဆုံးမလားဆိုတာ လေ့လာသိနိုင်ပါတယ်။အောက်မှာရေးထားတဲ့ အချက်တွေအားလုံး သင့်မှာရှိနေပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အနာဂတ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, NewsLeaveaComment on ဒီအချက် ၇ချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဟာ အနာဂတ်မှာ အရမ်းကိုအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသက်သေပြနေ